Pep Guardiola oo weli ku adkeynaya Yaya Toure xilli uu laacibku raali galin bixiyay – Gool FM
Pep Guardiola oo weli ku adkeynaya Yaya Toure xilli uu laacibku raali galin bixiyay
Byare November 5, 2016
(Manchester) 05 Nof 2016. Macallinka Man City Pep Guardiola ayaa sheegay inuu Yaya Toure kala hadlay raali galintii uu siiyay, laakiin wuxuu carabka ku adkeeyay inaysan weli wax is badelin.
Guardiola ayaa sheegay horaantii sanadkan inuusan Toure ka soo muuqan doonin qorsheyaashiisa haddii uusan si shaacsan raali galin uga bixin wixii uu wakiilkiisa saxaafada ka yiri.
Xiddiga reer Ivory Coast ayaana ugu dambeyn raali galin ka bixiyay shalay isagoo bartiisa facebook soo dhigay, ka hor saacado uun marka uu Guardiola u soo fariisan rabay shirkiisa jaraa’id ee usbuucalaha ah.
Waxaa la wada filayay in macallinka reer Spain uu aqbali doono raali galinta Yaya si uu xaalada u sifeeyo, balse wuxuu bixiyay jawaab aan caddeyn.
“Saakay ayaan la hadlay Yaya, dabcan waa wada hadalo qaas ah,” Guardiola ayaa sidaa yiri.
“Waan ogahahay wixii uu yiri aad ayayna muhiim ugu tahay Manchester City. Waa tan ugu muhiimsan, sidoo kale waa mid muhiim u ah Yaya, waa wax fiican.
“Dabcan waan aqriyay waxa uu doonayo waana intaa.”.
Mar Guardiola si gaar ah loo waydiiyay haddii uu Yaya heli doono fursado loogu soo daro kulanka maanta ee Middlesbrough ayaa yiri: “Yaya wuxuu ku jiraa tababaradeena, kulamadeena ayuu ku jiraa, waad ogeydeen xaalada, waxba isma badelin.”.
Antonio Conte oo daaha ka rogay sirta ka dambeysa qaab ciyaareedka wacan ee Eden Hazard